Inowedzerwazve: Gadziridza chero CMS, Ecommerce Platform kana Static Webhusaiti | Martech Zone
Inopindura bhurocha uye ecommerce saiti zvine zveazvino zvemukati zvakakosha kupfuura nakare kose. Iko kugona kwekuvandudza yako saiti haina kuganhurirwa kune zvemukati shanduko, zvakare ndeyekuenderera nekuvandudza mapeji ekutsvaga, nhare, uye shanduko. Muzuva rino nezera, zviri zvishoma zvinotyisa kuti vangangoita hafu yevatengesi vanofanirwa kubata yavo IT department kuti vaite shanduko dzekutanga kune yavo webhusaiti vhiki nevhiki - asi ichokwadi.
Ayima akazivisa kuburitswa kwe Inowedzerwazve, chigadzirwa chitsva cheSawaS chinoenderana nerevers proxy tekinoroji iyo inogonesa vashandisi kuita shanduko kune yavo webhusaiti ipapo, pasina kuda back-end kana zvemukati manejimendi kuwana.
Kunyangwe iyo webhusaiti iri pamusoro pebhizimusi-chikamu chemukati manejimendi sisitimu, e-commerce chikuva kana bhurogu system, Kugadziridza kunopa browser-yakavakirwa mhinduro iyo inorerutsa maitiro akaomarara, ichigonesa varidzi vewebhusaiti nevashambadziri kuti vachinje pane kubhururuka, uye pakupedzisira kuchengetedza nguva uye mutengo pazvikumbiro zvekuvandudza.
Yakagadziridzwa Vhidhiyo Kuongorora
Kubudikidza neyakajeka WYSIWYG (Zvaunoona NdoZvaunowana) mupepeti, Kugadziridza kunogona kushandiswa kune anotevera mabasa uye zvimwe:
Kubata zviripo gutsikana pane peji rewebhu
Kugadziridza URLs / Kudzoreredza Mapeji
Kuita pa-peji SEO recommendations
Kuuraya HTML kodhi inoshanduka
Kugadzira brand itsva mapeji uchishandisa aripo mawebhusaiti matemplate
Inowedzerwazve inobvumidza makambani kukoka vashandisi vazhinji sekudikanwa nemvumo yakakwana.
KuAyima, takagara tichipa mhinduro dzedhijitari kune vatengi vedu, asi isu takawanawo matambudziko akadaro kakawanda. zvemukati zvikwata izvo zvisingakwanise kugadzirisa typo vasina kuwana rubatsiro rwekuvandudza webhu, Paid Media zvikwata izvo zvisingakwanise kuti mapeji avo ekumhara abudiswe nekukasira, uyezve, vagadziri vewebhu avo vakanamatira kuita zvinyorwa zvidiki kune webhusaiti, vachivhara avo mutsara wekushanda kana ivo vangave vachishanda mukuwedzera hunyanzvi hwesaiti. Isu taida kugadzirisa izvi, uye neAdvapatable, vagadziri vanogona kudzokera kuti vaite zvavanoda, nepo avo vasina ruzivo rwekuvandudza webhu vanogona kuita shanduko dzinodzorwa uye kugadzirisa kweSEO pane nhunzi. Rob Kerry, Chief Strategy Officer paKugadziriswa.
Mitengo yemitengo ye Inowedzerwazve tanga pa $ 99 pamwedzi.
Tags: Ayimacms inogadziridzacontent managementredirectsreverse proxysaasinogadziridzwa
Yekupedzisira Nhungamiro yekuti Ungatengesa sei paAmazon